android ဖုန်းမရှိပဲ pc မှာ viber အသုံးပြုချင်သူများအတွက်။ ~ မိုးညိုသား
android ဖုန်းမရှိပဲ pc မှာ viber အသုံးပြုချင်သူများအတွက်။
2:00 AM Viber for Pc 1 comment
မိမိတို့ မှာဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုရှိရှံ မျှနှင့်pc ပေါ်မှာ viber ကိုအသုံးပြု လို့ ရနိုင်ပါပြီ။
ဒီပိုစ်လေးမှာ virtual box ဆော့ ဝဲတစ်ခု ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိတို့pc မှာ android os ကို တင်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်သလို.....မိမိတို့ ဖုန်းအတွက် root လုပ်ခြင်းများ ကိုလည်း ကွန်ပျူတာမလို ပဲ အဆင်ပြေအောင်
နည်းပညာ လေ့ လာလိုက်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် click တစ်ချက်တည်းနဲ့ အဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုတာ 100 % နှုန်း လုံးဝ (လုံးဝ ) သေချာပေါက် ဖြစ်အောင်
ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်.......video file လေးကိုကြည့် ပြီး လုပ်သွားလို့ ရအောင် ဘလော့ အောက်ခြေမှာ တင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ........
အဆင့်( ၁ )
အရင်ဆုံးလိုအပ် မဲ့virtual box ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်း ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ......ပြီးရင် insall လုပ်ပေးထားပါ.
အဆင့် ( ၂ )
လိုအပ်မဲ့android os ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ......ပြီးရင် android os ကို double click နဲ့run ပေးလိုက်ပါ.......ပြီးရင် import ကိုနိုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ android os ကစတင် ပြီးသင့် ကွန်ပျူတာမှာ အလုပ်လုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့ ရပါမယ်...
start ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်လေးကိုနိုပ်ပါ။
android logo လေးပေါ်လာပါလိမ့် မယ် ခဏစောင့် ပေးပါ
ဒီနေရာမှာ language ကိုအောက်ကပုံအတိုင်းရွေးပေးပြီး start ကိုနိုပ်ပါ။
gmail account ရှိလားမေးလာတဲ့ ပုံပါ no ကိုနိုပ်ပြီး သွားလိုက်ပါ။
next button ဖြစ်တဲ့အပြာရောင်လေးနဲ့ ထောက်ထားတဲ့ မြှားကို ကလစ်ပါ။
not now ကိုရွေးပေးပါ။
ဒီနေရာမှာ မိမိနှစ်သက်တဲ့ နာမည်ကိုပေးပေးပါ။
set up complete ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ အတွက် finshed ကိုနိုပ်ပါ။
flashplayer ကို install လုပ်ဖို့ အတွက် ok ကိုနိုပ်ပေးပါ။
google play store ထဲကိုဝင်ဖို့ အတွက် မိမိမှာ အသုံးပြုနေတဲ့email နှင့်password ကိုထည့် ပေး
not now ကိုနိုပ်ပေးပါ။
playstore မှာ super su ကို install လုပ်ပြီး မိမိရဲ့android tablet ကို root acess ယူပါ
super su ကိုဖွင့် ပြီး အပြာရောင်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့TWRP/CWM ကိုနိုပ်ပါ။
ZAWGYI FONT CHANGER ကို INSTALL လုပ်ပါ။ ပြီးရင် FONT CHANGE ပေးပါ။
ဇော်ဂျီ ကို install လုပ်ပေးပါ။
restart ချပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် start ကနေတစ်ခါ ပြန်ပြီးပါဝါဖွင့် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့မိမိတို့tablet မှာမြန်မာစာ အမြင်မှန် တာကိုတွေ့ ရမဲ့ အနေအထားပါ။
viber ကို playstore မှ install လုပ်ပါ
viber ကိုဖွင့် ပြီး မိမိဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
မိမိဖုန်း ထဲသို့viber မှရောက်လာသော code နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့် ပေးပါ။
မိမိဖုန်းမှာ viber အသုံးပြုလို့ ရပြီဆိုလျင် ကွန်ပျူတာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ ကွန်ပျူတာအတွက် လိုအပ်သော viber ကို ဒီနေရာမှာဒေါင်းပါ။ install လုပ်ပါ။
မိမိမှာ ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါသလားလို့ မေးလာတဲ့ အခါ yes ကိုနိုပ်ပြီး အပေါ်က ဖုန်းမှာ ထည့် သွင်းထားသောဖုန်းနံပါတ်ကို တစ်ခါထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါ။
မိမိတို့ ဖုန်းထဲ သို . code နောက်တစ်ကြိမ်ထပ် ပို့ ထားပါလိမ့် မယ်.....ဖြည့် ပေးလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ မပို့ ထားရင်လည်း အရင်ဆုံး မိမိတို့ အသုံးပြုခဲ့ သောကုဒ်နံပါတ်ကို ပြန်ထည့် ပေးလျင်လည်း
ဒါကတော့မိမိတို့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့app တွေကိုပြသထားတာပါ။
အဆင်ပြေအောင် video file လေးပါ တင်ထားပေးပါတယ်။
Kyaw Moe Khaing February 28, 2014 at 11:30 PM
အကိုရေ viber ကကုတ်နံပါတ်မပို့ပေးဘူးဖြစ်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ......pc ပေါ်တင်ချင်လို့ပါ...